PuntlandMassacre Dhaamssi gaddaa kan armaan gadi kun ganama kana haawaasa Oromoo Puntland jiran irraa Kichuu
HomeAfaan OromooNewsPuntlandMassacre Dhaamssi gaddaa kan armaan gadi kun ganama kana haawaasa Oromoo Puntland jiran irraa
PuntlandMassacre Dhaamssi gaddaa kan armaan gadi kun ganama kana haawaasa Oromoo Puntland jiran irraa na dhaqabe. Garaan kiyya miira haamaan natti dhagahamuulle haarkki koo na maxxanssu dide olee. Dhiigni Obboleeyyan Kiyya Ilmaan Oromoo adduunyaan callistee laaluun kuniis heeddu na gaddisiisu bira kutee na aarsee. Garuu carraan Oromoo maaliif akkana tahe tan Jattu gaaffifin deebii uf irraa dhabee.
Via: Dahabe Abdella
Inna lillahi wa inna ilehi raji.uun.
Somalia Punt land magaala bosassoo Keysatti lammile oromo ajjechaan bifa garagaraatin irratti rawatame.
1.Abdujaliil hussein mohammad
Iddoon dhaloota isaa oromia godina baale
anaa gololchatti dhalate Abduljaliil halkan edaa qama hin bekamneen akka malee tumani ajjesan Ega ajjesani booda Refka isa kara ispalti irratti darbaan
2. Aliyyi ibrahim Dhalataa godina harargee lixa magaala cirootiAjjechaan aliyyi irratti gageyfamte.egaan ajjesani booda dhoysaan awaluuf isaani dema jiruun qabaman.
Daldaltoota tariiba kan dhigaa ilmaan oromo bifa adda addaatiin ajjesa sama gurgucha turan tahu odeyfanoon bilisa nuuf adeysee jira. Refka obboleyyan kenya mana hospitala magaala bosasso irra fudhamani yeroo amma awalaaf demaa jiran.
Gutuma gututti ilmaan oromo punt land keysa jiran bifa sadihiin ajjechaan irratti dema waan jiruuf sabononni oromo akkasummatti kominitiin oromo biyyoota adunya irratti arkamtan bala
Amma oromo tahu kenyaaf nurrati dema jiru kana jala nu barartan kabajaa oromummatiin isin gafannaa
Injifanoon kan umata oromotti.